I-Zapiet: Nika amandla ukuhanjiswa kunye nokuGcinwa kweeVenkile kunye noShopify | Martech Zone
I-Zapiet: Nika amandla ukuhanjiswa kunye nokuGcinwa kweeVenkile kunye ne-Shopify
Ngamazwe ahlukanisiweyo nokusasazeka kwe-COVID-19, iinkampani ziyasokola ukugcina abasebenzi babo besebenza, iingcango zabo zivulekile, kwaye bephila. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, bendincedisa Ifama yendawo ihambisa inyama e-Indianapolis kunye nabo Shopify ufakelo. Babenabathengisi abaliqela ababedibanise inkqubo phambi kwam beza ebhodini kwaye bendisebenza ukuqinisa ukudityaniswa kunye nokwenza ngcono xa ubhubhane ubethile.
Ifama ngoku isebenza ubusuku nemini ukugcina iimfuno zabantu, kwaye ibiyinkxaso yam kubathengi kunye nabasebenzi. Bebengenaye umntu wobuchwephesha wokuncedisa kwaye bekukho ukudityaniswa kwesandla okuninzi. Nangona kunjalo, enye into ebalulekileyo yokufakela i-Shopify yayisicelo esakhiwe ngu I-Zapiet yokugcina iVenkile kunye nokuhanjiswa.
Ukuthathwa kweZapiet Ivenkile + yokuZisa
Ngeapp yabo, ndikwazile ukwenza okwahlukileyo Imimandla esekwe ngekhowudi yeposi abeke amaxesha okulungiselela kunye neentsuku zokuhanjiswa. Sikwazile ukongeza indawo zokugcina kubathengi ukuze bathathe ii-odolo zabo ngokuthe ngqo. Amaxesha okulungiselela enza ukuba abasebenzi babe nexesha lokudibanisa iiodolo, balayishe, bahambise okanye babathathe. Kwimeko yomthengi, babenamandla abo okuhambisa. Inkqubo iyadibana nezinye iinkonzo zokuhambisa, nazo, nangona kunjalo.
Umdibaniso wenqwelomoya weShopify awunamthungo, uvumela umthengi ukuba akhethe ukuhanjiswa okanye ukugcina iveni. Ukuba ihanjiswa, iikhowudi zeposi okanye ii-zips ziqinisekisiwe njengendawo ehanjisiweyo kunye nesikhethi somhla sinikezelwe ukukhetha umhla wokuhambisa ofanelekileyo. Ukuba yipopi yevenkile, unokufumana eyona venkile ikufutshane. Ukuba unendawo enye kuphela, khetha kuphela xa ungathanda ukuthatha iodolo. Nantsi indlela ejongeka ngayo kwindawo yomthengi wam:
Inqaku eliphambili: Ukuba uphakathi eIndiana kwaye ungathanda ukuzama ukuhanjiswa kwekhaya laseTyner Pond, nantsi I-10% isaphulelo kwi-odolo yakho yokuqala!
I-Shopify App yeZapiet iphumelele kangangokuba iqela labo lenkxaso bathe bongeze ngaphezulu kwewaka leevenkile ngeli xesha lobunzima. Iqela apho lisebenza imini nobusuku ukunceda abo bathengi bebhodi kwaye baqwalasele usetyenziso lwabo.
Uhlelo lokusebenza lubhetyebhetye ngendlela emangalisayo. Xa sasifuna ukuvala iveni, kwakulula njengokuyicima kwi-app kwaye sinokuhlala siyivumela kwakhona xa ingxaki iphelile. Sikwenze ukuba umyalezo omnandi webar oza neapp, esenza iindwendwe ezintsha ukuba zijonge ukubona ukuba sihambisa ikhowudi ye-zip.
Iimpawu zoGcino lweVenkile + yokuHanjiswa ziBandakanya:
Ukufumaneka kwemveliso -Phawula iimveliso ezizodwa njengezifumaneka kuphela ekuthumeleni, ukuhambisa okanye ukuhambisa.
Ivenkile yokudibanisa iPOS Jonga, lawula kwaye uququzelele i-oda yakho yeefoto kunye nokuhanjiswa kwivenkile.
Uluhlu lweendawo ezininzi -Ngqamanisa kwaye ubonise abathengi ukuba bahlala ngokufumaneka kuyo yonke indawo.
Ulawulo lomyalelo -Jonga ngokujonga nje ukuba yeyiphi ii-odolo ekufuneka uzilungiselele nayiphi na imini okanye indawo.
Ukuthintela ubuqhetseba -Gcina iiodolo zakho zikhuselekile ngakumbi kubuqhetseba ngokuphumeza usetyenziso lweKhowudi yoKhuseleko.
Iindawo ezingenamda - Ngenisa ngokulula zonke iindawo zakho kwaye uzilawule ngokwahlukeneyo.
Ukwenziwa ngokwezifiso ngokubanzi Chaza ubukho, iindawo zokuphumla, izinto ezenzekileyo, i-automation, imigaqo kunye nokunye.
Umhla kunye nesikhethi sexesha -Seta indawo kunye nokufumaneka kwemveliso ukuya kuthi ga kwimizuzu emi-5 kwaye uvumele abathengi bakhethe.
Isebenzisane ngokupheleleyo -Udityaniswe neDeliv, iQuiqup, ukuThumela ngokuSebenzayo, ukuHanjiswa kweBespoke, iMigaqo yokuThumela ePhambili kunye nokunye. Bona zonke Ukudityaniswa kweZapiet.
Uyilo lwenkxaso yoku-odola -Guqula iidrafti esele zikho kwiipopi okanye iiodolo zokuhanjiswa.
Ukuhanjiswa kwemida yokubeka -Thintela ukugqithisa kokusebenza ngokunciphisa umda kwinani lokuhanjiswa kulo naliphi na ixesha elinikiweyo.
Ukuqinisekiswa kweGeodistance -Zenzele ngokuzenzekelayo ixabiso elifanelekileyo kunye nenkonzo esekwe kwindawo yabathengi.
Kwaye, ukuba ufuna ukwenza ngokwezifiso amaxabiso akho okuhambisa, iZapiet ikwanayo neapp Ukuhanjiswa kwamaxabiso ngomgama or Ukuhanjiswa kwamaxabiso ngeKhowudi yeZip. UZapiet unikezela ngesilingo sasimahla seentsuku ezili-14, ukuze ujonge usetyenziso olulungele ukuhamba kwakho kwaye wenze le nto uyifunayo. Rhoxisa ngelo xesha kwaye awuyi kuhlawuliswa.
Faka indawo yokuGcina iZapiet + ukuHanjiswa
tags: usetyenziso lokuhambisaukuhanjiswa kweecommerce ekhayaiveni yevenkile ye-ecommercethengaIvenkile yokuthenga ivenkileIfama iTyner Pond